‘गोरे’को बयानले यी भिभिआइपी नेता र पुलिसहरूको किन गयो सातो !::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
‘गोरे’को बयानले यी भिभिआइपी नेता र पुलिसहरूको किन गयो सातो !
साढे ३३ किलो सुनका मुख्य अभियुक्त गोरे फरार भएपछि नेपाल र छिमेकी मुलुक भारतमा गरिएको अनुसन्धानबाट उनी काठमाडौं आएको सूचनाका आधारमा मंगलबार बिहान ५ः३४ मा काठमाडौं महानगरपालिका– ८ गौरीघाटबाट पक्राउ गरिएको संयोजक पौडेलले जानकारी दिए ।
३३ किलो सुनका मुख्य आरोपी भनिएका गोरेले आत्मसमर्पणका लागि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा पनि निवेदन दिएका थिए ।
अधिवक्तामार्फत वारेसनामा सहित निवेदनमा गोरेले आफ्नो ज्यानको खतरा रहेको र न्यायालय समक्ष आत्मसमर्पण गरेर सबै सत्यतथ्य जानकारी गराउने उल्लेख गरेका थिए । तर, नाटकीय रुपमा छानविन समितिले पत्रकार सम्मेलन गरेर गोरेलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ ।
गोरेले आफू सुन भरिया मात्रै रहेको बयान समिति समक्ष दिएका छन् । गोरेले नेतादेखि उच्च प्रहरी अधिकारी र अन्य भिभिआइपीहरूको नाम समेत लिएको उच्च स्रोतले जनाएको छ । गोरे पक्राउ परेपछि सुनकाण्डमा संलग्नहरूको होस उडेको छ ।
यस प्रकरणमा विसं २०७५ वैशाख १९ गते मोरङ जिल्ला अदालतमा ६५ जनाको नाममा मुद्दा दर्ता गरिएकामा ३२ जनालाई अदालतमा उपस्थिति गराइसकिएको र अरू ३३ जना अहिलेसम्म पनि फरार रहेको पौडेलले बताए ।
संयोजक पौडेलले घटना जेरीजस्तै जेलिएकाले गम्भीर रूपमा अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए । अनुसन्धानका लागि गठित टोलीलाई ४५ दिनको म्याद दिइए पनि टोलीले अनुसन्धान पूरा गरी नसकेकाले सरकारले टोलीको म्याद जेठ मसान्तसम्मका लागि थप गरेको छ ।